Scruffy हाँस | ExpressCasino.com - शीर्ष अनलाइन & मोबाइल स्लट Jackpots!	Scruffy हाँस | ExpressCasino.com - शीर्ष अनलाइन & मोबाइल स्लट Jackpots!
फिन र Swirly स्पिन™
खेल शीर्षक सुझाव रूपमा, Scruffy हाँस डोनाल्ड धुनमा वर्ण resembling बतख को एक परिवार एक कार्टून शैली स्लट खेल आधारित छ. यो निःशुल्क बोनस स्लट अनलाइन खेल पाँच रील र बीस-पाँच निश्चित paylines छ. पृष्ठभूमि अहिले र त्यसपछि एक लिली प्याड मा एक भ्यागुतो र एक एनिमेटेड मौरी हरेक पप संग सफा नीलो ताल छ. संगीत groovy को चाल मा तपाईं राख्छ कि एक मोटी ज्याज एक कार्टून शैलीमा विधा हो. त्यहाँ पनि संयोजन विजेता लागि विभिन्न ध्वनि छन्. को रील हास्यास्पद कार्टून वर्ण संग धेरै रंगीन हेर्न. तपाईं क्रमशः न्यूनतम र अधिकतम छन् कि £ 0.25 र £ 250 को बीच राशि छनौट आफ्नो बाजी गर्न सक्नुहुन्छ.
Scruffy हाँस विकासकर्ता बारेमा
यो मनोरंजक निःशुल्क बोनस स्लट अनलाइन खेल NetEnt विकास भएको थियो, अनलाइन क्यासिनो खेल समाधान मा विश्व नेता. तिनीहरूले विभिन्न फरक विभाग देखि स्लट को सय भन्दा बढी शीर्षक र अन्य खेल छ. आफ्नो खेल को सबै भन्दा कम्प्युटर र मोबाइल सहित विभिन्न उपकरणहरूमा प्ले गर्न निर्माण गर्दै.
यो निःशुल्क बोनस स्लट अनलाइन खेल विषय मिल्न साँच्चै हास्यास्पद हेर्न केही प्रतीक छ. तिनीहरूले spins समयमा संयोजन विजेता मा प्रभावशाली एनिमेसन प्रस्ताव. त्यहाँ चार धुनमा प्रतीक जस्तै एउटै परिवारका हौं देखिन्छ जो छन्. तिनीहरूले बुबाको जस्तो, आमा, एक किशोर छोरा र एक बच्चा. पिता धुनमा को उच्चतम खम्बा दिन्छिन् 400 सिक्का जब आफ्नो प्रतीक पाँच एक payline मा जमीन. कम तिर्ने प्रतीक K कार्डहरू एक खेल्दै छन्. तिनीहरूले भाँचिएको अन्डा गोले भित्र देखा र पूर्ण विषय संग. त्यहाँ दुई बोनस प्रतीक र तिनीहरूले तितो ducklings छन् र मुक्त प्रतीक spins.
जंगली बोनस विस्तार: तितो duckling यो जंगली प्रतीक हो निःशुल्क बोनस स्लट अनलाइन खेल. यो एक विजेता संयोजन हुन्छ जब सम्पूर्ण रील ढाक्न विस्तार. थप जंगली प्रतीक landings ठूलो र मेगा WINS योगदान जहाँ तपाईं जित्न सक्छ 5000 पटक खम्बा.
बोनस फ्री Spins: तपाईं देखि जित्न सक्छौं कि पाँच विभिन्न सुविधा छन्. तीन वा बढी मुक्त प्रतीक देखा पर्नेछन् spins जब यो रूपबाट. तपाईं तल कुनै पनि एक जित्न सक्छौं.
6 कुनै पनि तल सुविधाहरू दुई निःशुल्क spins.
8 अनियमित जंगली उपस्थिति निःशुल्क spins.
10 तीन पूर्ण रील समेट्छ कि Colossal जंगली निःशुल्क spins.
12 कम मूल्यवान व्यक्तिहरूलाई हटाउँदछ कि प्रतीक हटाउने संग spins.
15 सबै विजेता संयोजन मा 3x गुणक संग spins.
विभिन्न बोनस सुविधा र रंगीन एनिमेटेड कार्टून प्रतीक संग, यो निःशुल्क बोनस स्लट अनलाइन सबै भन्दा राम्रो मनोरंजन छ. तपाईं सजिलै संग आफ्नो पक्षमा अलिकति भाग्य संग पुरस्कार भार जित्न सक्छौं.
Copyright © 2018, एक्सप्रेस क्यासिनो. all rights reserved.